စာရေးဆရာတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေက ပိုပြီးပင်ပန်းကြရတယ်!!!! - JAPO Japanese News
ဂါ 28 Apr 2020, 12:08 ညနေ
သူတို့အတွက်တော့ ပုံမှန်ပဲလို့ထင်ကောင်းထင်ရပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းအတွက်တော့ ပင်ပန်းမှာပါ။
သူ့တို့ဝေယျဝစ္စတွေကိုလုပ်ပေးရတဲ့ ဇနီးသည်တွေကတော့ တော်တော်လေးပင်ပန်းရတယ်။
သူ့ရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာကတော့ “ ကျွန်တော်က ကြောင်ကလေးပါ” ဆိုတဲ့စာအုပ်…..
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငွေစက္ကူမှာလည်း ဖော်ပြခြင်းခံရလောက်အောင် နာမည်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ 鏡子（きょうこ）Kyōko　ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ထပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ 漱石 Soseki ဆီကနေရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတာကတော့ တော်တော်လေးကိုအသည်းနာဖို့ကောင်းတယ်။
“ ငါက စာအများကြီးမလေ့လာရင်မရတဲ့အတွက် မင်းကိုကရုစိုက်ဖို့ငါ့မှာအချိန်ပိုမရှိဘူး”
ဒီလိုအေးစက်တဲ့စကားကို သွေးအေးအေးနဲ့ပြောခဲ့ပေမဲ့၊ ကလေးကတော့ ၈ ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်!!
漱石က　အမျိုးသမီးဖြစ်သူကို ဂုန်လျှော်အိတ်အလုံး ၅၀လောက်ပေးပြီး ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“ အကယ်၍မီးလောင်ခဲ့ရင် ဒီထဲကိုစာအုပ်တွေထည့်ပြီးပြေးပါ” တဲ့…..
ကဲ..ဇနီးသည်ရဲ့အသက်ကပိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလာ? အဲ့ဒီလိုပြောရမှာထက် အိတ်အလုံး ၅၀ ထဲကိုစာအုပ်တွေထည့်ပြီးပြေးဖို့ဆိုရင်တော့ အသက်တောင်မှီလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်…..
နောက်ပြီး漱石က နယ်ဘက်ကိုအလုပ်နဲ့ရောက်နေစဥ် သတင်းစာမှာပါလာတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုသဘောကျလွန်းလို့၊ ဇနီးဖြစ်သူကိုနေ့တိုင်းနယ်ကိုသတင်းစာပို့ခိုင်းတယ်။ နေ့တိုင်းဆိုတော့ ဇနီးသည်လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ရတဲ့အတွက် ၃ ရက်စာလောက်စုပြီးပို့ထားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီလောက်အထိ ပင်ပန်းရတယ်…
ဇနီးသည်က ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ကြံစည်တဲ့အချိန်
သေကြောင်းမကြံဖို့အတွက် နှစ်ယောက်သားလက်ကောက်ဝတ်ကို ကြိုးနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးအတူတူအိပ်ပေးတာတို့…
堕落論（だちくろん）Corruption theory 、白痴（はくち）Idiocy ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး၊ အရက်မူးလာရင်‌တော့ တော်တော်လေးသွေးဆိုးတယ်။
အရက်မူးရမ်းကားပြီး အချုပ်ထဲရောက်ရတာတွေလည်း အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။
အဲ့ဒီအချိန် ဇနီးဖြစ်သူ 三代子（みよこ）Miyoko ကတော့ ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“ 坂口ကဆိုးသွမ်းသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ အရက်သောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ ヒロポン Hiropon သုံးတဲ့အချိန်ကလွှဲရင်ပေါ့”
ヒロポン Hiropon ဆိုတာ အဲ့ဒီအချိန်ရောင်းချနေတဲ့ စိတ်ကြွဆေးဖြစ်ပြီး၊ ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကို တက်ကြွစေတယ်။
父帰る Return home、真珠夫人 Mrs. Pearl　အစရှိတဲ့စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုရေးသားခဲ့ပေမဲ့၊ မိန်းမရှုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီအပျော်အပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကိုတော့ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။
လက်ချိုးရေလို့မရလောက်အောင် မိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာ တော်တော်ကြီးသည်းခံထားတဲ့အမျိုးသမီးက သူ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါ ဒီစကားကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ဆောရီးပါ။ အသက် ၆၀ ရောက်လာတဲ့အခါ ထိန်းမရတော့ဘူး”
သို့သော် 菊池寛 က အသက် ၆၀ မရောက်ခင် ၅၉ နှစ်မှာပဲဆုံးသွားပါတယ်။
荒野聖（こうやひじり）Sacred wilderness　ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့နာမည်ကျော်လာတဲ့ စိတ်ကူးယဥ်ဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ဆရာဆီကနေလက်ထပ်ဖို့ကို အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခြင်းခံရပြီး လက်မထပ်လိုက်ပေမဲ့၊ ဆရာဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ ချက်ချင်းပဲလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအထိကတော့ အရမ်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စကားတွေပြောကြပေမဲ့၊ ဘာလို့နေ့တိုင်းဇနီးဖြစ်သူနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရလဲဆိုတာကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့အဖြေကတော်တော်လေးကို ထူးဆန်းတယ်။
“ ကျွန်တော်က ခွေးဆိုရင်အရမ်းမုန်းတာ၊ ခွေးလိုက်ခံရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အစားတစ်ယောက်ယောက်ရှိဖို့၊ အိမ်ဖော်မလေးကိုခေါ်ပြီးလျှောက်မယ်ဆိုရင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်လေ။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးလမ်းလျှောက်တာပါ”
အထင်ကြီးလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလို့ထင်ရပေမဲ့၊ လူသားအနေနဲ့ကတော့ တကယ့်ကိုလူ့အမိုက်ပဲ …
人間失格　Human disqualification,　斜陽（しゃよう）Sunset　စတဲ့၊ hopeless novel တွေနဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးစာပေတွေကိုရေးတဲ့太宰မှာ သေချာပေါက်စိတ်ကျရောဂါရှိနေပြီး၊ အသက် ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၇၊ ၂၉ နှစ်အရွယ်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ ၃၉ နှစ်မှာရည်စားထားပြီး၊ ချက်ချင်းအဲ့ဒီချစ်တဲ့သူနဲ့ကလေးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကလေးမွေးတဲ့နှစ်မှာပဲ အခြားချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့အတူ suicide လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ 美和子（みわこ）Miwako　ဆီကိုသေတမ်းစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်။
“ သေတမ်းစာလေးတောင်ရေးခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ပျော်ပါတယ်”
ဇနီးသည်ကိုပစ်ထားပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ သတိယသားပဲ ဆိုတာပြောချင်တာနေမယ်…
သမိုင်းမှာနာမည်တွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စရိုက်တွေကတော့ ပုံမှန်လူနဲ့နည်းနည်းတော့မတူဘူးနော် …
စာဖတ်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သူတွေကရော၊ မဟုတ်မှလွဲရောနောင်တစ်ချိန် နာမည်ကြီးသူတွေများဖြစ်လာမလား..???
အရက်အမူးလွန်ပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်တတ်လွန်းလို့ အရက်ကို ဂရုတစိုက်သောက်ကြပါ။